Altrenogest အမှုန့် (850-52-2) hplc≥98% Buy | AASraw
/ ထုတ်ကုန်များ / အမျိုးသမီးဟော်မုန်း / Altrenogest အမှုန့်
SKU: 850-52-2. အမျိုးအစား: အမျိုးသမီးဟော်မုန်း
AASraw CGMP စည်းမျဉ်းများနှင့် trackable အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှုစနစ်ကအောက်မှာ Altrenogest အမှုန့် (850-52-2) ၏အစုလိုက်အပြုံလိုက်အမိန့်မှဂရမ်ကနေပေါင်းစပ်နှင့်ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းရည်နှငျ့အတူရှိ၏။
Altrenogest အမှုန့် မကြာခဏလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ / ရန်လိုသည့်အပြုအမူဖိနှိပ်ဖို့ Off-တံဆိပ်ကိုအသုံးပြုခြင်းအဖြစ် equine စက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်နုပျိုမြင်းမှအုပ်ချုပ်ခွင့်ရနေသည်။ ဒီလေ့လာမှုမှာစောစော-performance ကိုလေ့ကျင့်ရေးအတွက် 2-နှစ်အရွယ်ရပ်ကွက်မြင်းမြင်း altrenogest လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ / ရန်လိုသည့်အပြုအမူအပေါ်သက်ရောက်မှု, testicular parameters တွေကိုနှင့် Steroid တစ်မျိုးဟော်မုန်း profile များကိုဆုံးဖြတ်ရန် (0.044 နေ့စဉ် / ကီလိုဂရမ် BW mg) အုပ်ချုပ်ခဲ့ကြသည်။
Altrenogest အမှုန့် အခြေခံဇာတ်ကောင်
အမည်: Altrenogest အမှုန့်
ပွိုင့်အရည်ပျော်: 116 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်မှ 120
Commons က BRAND (S): Altrenogest အမှုန့်
ယေဘုယျအားဖြင့် NAME (S က): Regumate, Matrix, Regumate အမှုန့်, Matrixpowder
Altrenogest အမှုန့်တစ် progestagen, ယောက်ျားလိင်ဟော်မုန်း, testosterone ဟော်မုန်းမှဖွဲ့စည်းပုံအလားတူသောအစွမ်းထက်ဟိုအေးဂျင့် trenbolone ၏17α-allyl ဆင်းသက်လာသည်။ Altrenogest အမှုန့်ရာ၌, နှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်တည်းကိုယှဉ်ပြိုင်မြင်းများအတွက်ရှည်လျားသောကာလများအတွက်ကျယ်ပြန့်အသုံးပြုသည်။ ဤသည်သူတို့အားအရှင်ပိုပြီး tractable နှင့်သင်တန်းနှင့်ယှဉ်ပြိုင်မှုအတွက်သင့်လျော်အောင်, မျိုးဆက်ပွားသိသိ ameliorate ဖို့ကြိုးစားမှုကိုတွေ့ရှိနိုင်ပါသည်။ သို့သော်ကြာရှည်အုပ်ချုပ်ရေးထုတ်လုပ်သူ '' အကြံပြုချက်များနှင့်အညီမဟုတ်ပါဘူး။ နိုင်ငံအများစုတွင်, မူးယစ်ဆေးဝါး oestrus သံသရာ၏နှောင်းပိုင်း်ကူးေူပာင်းမြဆိုင်ရာအဆင့်တွင် ovulatory oestrus ၏ induction ၏ရည်ရွယ်ချက် 10 နေ့ရက်ကာလအဘို့မြင်းသာပါးစပ်အုပ်ချုပ်မှုများအတွက်မှတ်ပုံတင်ထားသည်။ Altrenogest ကုန်ကြမ်းအမှုန့်အုပ်ချုပ်ရေးစတင်သည့် 2-3 ရက်အတွင်း Mare အတွက်အမူအကျင့် oestrus ဖိနှိပ်။ Altrenogest မှုန့် Mare မှရေရှည်အုပ်ချုပ်ရေး၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများအထူးသဖြင့်ယှဉ်ပြိုင်ရာတွင်အသုံးပြုသူတို့အားရည်ညွှန်းအတူအဓိကအားမသိရှိပါ။ ထို့အပြင်ကမူးယစ်ဆေးမဆိုဟိုသို့မဟုတ်မြင်းများအတွက်သိသာထင်ရှားသောအပြုအမူသက်ရောက်မှုရှိပါတယ်ရှိမရှိရှင်းရှင်းလင်းလင်းမသိရပါဘူး။
လေ့လာမှုတစ်ခုထို့ကြောင့်လူမှုရေးအဆင့်ဆင့်, ခန္ဓာကိုယ်-အစုလိုက်အပြုံလိုက်နှင့်ခန္ဓာကိုယ်အခွအေနေရမှတ် (BCS) ၏စည်းကမ်းချက်များ၌အထိုင်များ Mare မှ Altrenogest ကုန်ကြမ်းအမှုန့်များ၏တာရှညျအုပ်ချုပ်ရေးပဏာမအကဲဖြတ်ပေးဒီဇိုင်းရေးဆွဲခဲ့သည်။ ရောထွေးဖောက် (အာဇာနည်နှင့် Standardbred) ၏တဆယ်နှစ်လုံးကို Mare ဒေသခံတစ်ဦးမြင်းကုန်သည်များထံမှဝယ်ယူခဲ့ကြသည်။ အဆိုပါတိရိစ္ဆာန်များ 20 ရက်သတ္တပတ်တစ်ဦးစုစုပေါင်းအဘို့တစ်ခုတည်းအုပ်စုတစ်စုအဖြစ်စားကျက်မှာသိုထားခဲ့ကြသည်။ ဝယ်ယူပြီးနောက်အားလုံး Mare က de-worming, ပါးစပ်တွင်း prophylaxis, ခွါစောင့်ရှောက်မှုနှင့်ကာကွယ်ဆေးထိုးအပါအဝင်လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်ကကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုဆိုင်ရာလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ, ခံယူ။ Mare ဖမ်းမိထားကြောင်း, ဥပမာသူတို့တစ်တွေလူမှုရေးအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့အဖြစ်တည်ငြိမ်သည့်အချိန်ကာလအတွင်းလေးပတ်သစ်ကိုပတ်ဝန်းကျင်ကို acclimate ခွင့်ပြုခဲ့နှင့်လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်စီမံခန့်ခွဲမှုလုပျထုံးလုပျနညျးမှနေသားတကျဖြစ်လာသည်ခဲ့ပြွတ်အားဖြင့်ပါးစပ်ဆေး၏အုပ်ချုပ်ရေး, တစ်ဦးအရူးအမူးထဲတွင်နေရာ, ချိန်တွယ်။ မြက်ပင်ကျွေးမွေးခဲ့သည်လေ့လာမှုဖြည့်စွက် lucerne ၏တစ်ခုလုံးကိုကာလတစ်လျှောက်လုံး။ Mare အလေးချိန်ခဲ့ကြသည်နှင့်အခွအေနအေရမှတ်နှစ်ကြိမ်အပတ်စဉ်မှတ်တမ်းတင်ဖေါ်ပြခဲ့ပါတယ်။
ယှဉ်ပြိုင်မှု၌မွငျး oestrus ဖိနှိပ်မှုများအတွက် Altrenogest အမှုန့်များ၏ပါးစပ်အုပ်ချုပ်ရေးတချို့မြင်းစီးစည်းကမ်းများကိုအတွက်ကျယ်ပြန့်ဖြစ်ဟုယုံကြည်ကြောင်းနှင့်တစ်ဦးယှဉ်ပြိုင်ရာသီအတွင်းလပေါင်းများစွာစဉ်ဆက်မပြတ်အုပ်ချုပ်နိုင်ပါသည်။ Altrenogest ကုန်ကြမ်းအမှုန့်မဆိုဟိုတစ်ခုသို့မဟုတ်မြင်းတစ်ဦးမတရားအားသာချက်ချီးမွမ်းစေခြင်းငှါဂုဏ်သတ္တိများတိုးမြှင့်ကိုအခြားအလားအလာစွမ်းဆောင်ရည်ရှိပြီးရှိမရှိဆန်းစစ်ဖို့ကျနော်တို့လူမှုရေးအပေါ်ရှစ်ပတ်ကြာတဲ့ကာလအတွက်နေ့စဉ်ပေးသောပါးစပ် Altrenogest အမှုန့် (0.044 မီလီဂရမ် / ကီလိုဂရမ်) ၏သက်ရောက်မှုဆန်းစစ် 12 အထိုင်များ Mare ၏အဆင့်ဆင့်, လှုပ်ရှားမှုဘတ်ဂျက်, ခန္ဓာကိုယ်-အစုလိုက်အပြုံလိုက်နှင့်ခန္ဓာကိုယ်အခွအေနေရမှတ်။ ဒါဟာအထိုင်များ Mare မှထောက်ခံအုကူံပထိုးနှုန်းထားများမှာ Altrenogest ကုန်ကြမ်းမှုန့်အချိန်ကြာမြင့်စွာပါးစပ်အုပ်ချုပ်မှုကြီးစိုးအပေါ်မှအောက်သို့ဆင်း, ခန္ဓာကိုယ်-အစုလိုက်အပြုံလိုက်သို့မဟုတ်အခွအေနေရမှတ်အပေါ်အဘယ်သူမျှမသက်ရောက်ခဲ့ကြောင်းကောက်ချက်ချခဲ့သည်။
ဘယ်လို Altrenogest အမှုန့်အကျင့်ကိုကျင့်
ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတွေ့အကြုံကိုခုနှစ်, Altrenogest အမှုန့်အမြဲမြင်း၏ estrous သံသရာကျော်ကိုကြိုတင်ခန့်မှန်းထိန်းချုပ်မှုကွိုးစားအားထုတျနိုငျခဲ့သေးပါဘူး။ ထို့ကြောင့်ကျနော်တို့ estrous သံသရာကိုထိန်းချုပ်ရန်၎င်း၏ပျက်ကွက်မှုအတွက်အကြောင်းပြချက်ကိုသိရှိနိုင်ဖို့ Altrenogest ကုန်ကြမ်းအမှုန့်နဲ့ကုသခဲ့ 12 Mare ဆန်းစစ်ခဲ့သည်။ အဆိုပါ Mare 15 ရက် 20 များအတွက် Altrenogest အမှုန့်တိုက်ကျွေးခဲ့ကြသည်နှင့်ကုသမှုစဉ်အတွင်း follicles ဖွံ့ဖြိုးရေး, မျိုးဥထွက်နှင့် Corpus luteum ဖွဲ့စည်းရေးများအတွက်လေ့လာခဲ့ကြသည်။ ချို့ယွင်းသောအဘို့ကို real-time ultrasonography နှင့် radioimmunoassay ၏အသုံးပြုမှုမှတဆင့်ကျနော်တို့ Altrenogest ကုန်ကြမ်းအမှုန့်ကုသမှုသို့မဟုတ်ကုသမှု၏အဆုံးအပြီးမျှော်မှန်းထားသည်ထက်အစောပိုင်းကာလအတွင်းမျိုးဥထွက်မှဦးဆောင်အချို့ Mare အတွက်အရွယ်အစား preovulatory မှ follicles ၏တိုးတက်မှုဖိနှိပ်နိုင်ခြင်းမရှိခဲ့ပါကြောင်းသုံးသပ်ခဲ့သည်။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, Altrenogest အမှုန့်ကိုကုသနေစဉ်အတွင်းဖွဲ့စည်းခဲ့သော corpora lutea ၏ဘဝ-span အတိုကောက်မှပေါ်လာဘဲ,4Mare အတွက်ဒီကုသမှု၏အကြံပြု 15 ရက်ကြာကာလ၏အဆုံးပြီးနောက် corpora lutea များ၏ဇွဲခဲ့သည်။ အဆုံးစွန်သောတွေ့ရှိချက် Prostaglands လုပ်လိုက်တာတစ် luteolytic ထိုး Altrenogest ကုန်ကြမ်းအမှုန့်ကုသမှုရဲ့အဆုံးမှာပေးထားခဲ့လျှင်, estrous သံသရာထိန်းချုပ်အဲဒီမှာတိုးတက်ခဲ့ကြလိမ့်မယ်လို့အကြံပြုဖို့ကျွန်တော်တို့ကိုဦးဆောင်ခဲ့သည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့လေ့လာမှု၏ရလဒ်များကို Altrenogest အမှုန့်အချို့ခွအေနမြေားအော equine estrous သံသရာထိန်းချုပ်ဖို့ကျေနပ်ဖြစ်မည်အကြောင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့လက်တွေ့တွေ့ကြုံအတည်ပြုခဲ့သည်, ဒါပေမယ့်မျိုးဥထွက်ကျော်တိကျတဲ့ထိန်းချုပ်မှုလိုအပ်ပါသည်အခါမသုံးသင့်ပါတယ်။
Altrenogest အမှုန့် (ALT), ဓာတု progestogen နှင့် exogenous gonadotropin ပုံမှန်အားဖြင့်တစ်ဦးလျှော့မျိုးဥထွက်နှုန်းမှာအငယ်အမှိုက်သရိုက်များအရွယ်အစားရှိပြီးသောက် Leukocyte antigen (SLA) inbred သေးသေးလေးဝက်ဖို့အုပ်ချုပ်ခဲ့ကြသည်။ လေ့လာမှု 1 ခုနှစ်, 15 အရွယ်ရောက်ပြီးသူအမျိုးသမီးဝက်ဖြစ်စေထိန်းချုပ်မှု (Group မှငါဎ = 5) တို့က, အောင်ကျွေး 15 14 နေ့ရက်ကာလအဘို့ ALT / နေ့ Mg (Group မှ II ကို, ဎ = 5), သို့မဟုတ်ကျွေး ALT နဲ့ကိုယ်ဝန်ဆောင်မြင်းရဲ့သွေးရည်ကြည် gonadotropin နဲ့ကုသ (1200 ALT ဆုတ်ခွာ (Group မှ III ကို, ဎ = 500) ပြီးနောက် IU သည်, im) နှင့်အသီးသီး human chorionic gonadotropin (24 IU သည်, im) 104 ဇနှင့်5ဇ, ။ လေ့လာမှု 2, ဝက်၏ tbree အုပ်စုများ (; II ကို, ဎ = 24; ငါဎ = 11 III ကို, ဎ = 11) တွင်လေ့လာ 1 (အဖွဲ့များ II နှင့် III ကို) တွင်ဝက် mated ခဲ့ မှလွဲ. လေ့လာမှု2အတွက်သူတို့အားအလားတူကုသခံခဲ့ရသည်။ နှစ်ဦးစလုံးလေ့လာမှုများအတွက်အားလုံးတိရစ္ဆာန်များ၏သားဥအိမ်သားအိမ်လှုပ်ရှားမှုအကဲဖြတ်ရန် estrus ပြီးနောက် laparoscopically သို့မဟုတ် laparotomy 5-8 ရက်ပေါင်းအားဖြင့်ဆန်းစစ်ခဲ့ကြသည်။ လေ့လာမှု2အတွက်အုပ်စု II နှင့် III ကိုတိရိစ္ဆာန်များ၏ uteri သန္ဓေသား၏ရှေ့မှောက်တွင်နှင့်အရည်အသွေးအဘို့အအကဲဖြတ်ခဲ့သောတစ်ရှူးယဉ်ကျေးမှုအလတ်စားနှင့်အတူမှုများကိုထည့်သွင်းတွက်ချက်ခဲ့ကြသည်။
အဘယ်သူမျှမဝက် ALT အုပ်ချုပ်မှုကာလအတွင်း estrous အပြုအမူသရုပ်ပြခဲ့သည်။ အားလုံးကတော့တိရိစ္ဆာန်များ ALT ဆုတ်ခွာပြီးနောက်ပုံမှန် estrous အပြုအမူသရုပ်ပြခဲ့သည်။ နှစ်ဦးစလုံးလေ့လာမှုတွေကနေဒေတာတွေကိုပေါင်းစပ်ခဲ့ကြသည့်အခါအုပ်စု III ကိုဝက်အုပ်စု II ၏2၏ 16 (12.5%) နှင့်6၏ 16 (37.5%) ရပ်နေသည်ကို estrus သရုပ်ပြအောင်မြင်ခဲ့ပေ။ အတူ-drawal ALT ပြီးနောက်အဖွဲ့များ II နှင့် III ကိုအတွက်အမျိုးသမီးအသီးသီး 5.6 ± 0.3 နှင့် 5.8 ± 0.3 ရက်ပေါင်း (p> 0.05) တွင် estrus သို့ပြန်သွား၏။ corpora lutea အရေအတွက်ကထိန်းချုပ်မှု (0.05 ± 11.4) ကိုနှိုင်းယှဉ်ခြင်းနှင့် exogenous gonadotropin (1.8 ± 6.9) ၏အသုံးပြုမှုကိုအားဖြင့်နောက်ထပ် (p <1.3) သို့တိုးမြှင့်ပေးခဲ့သည်တစ်ဦးတည်း ALT ကုသမှု (0.01 ± 22.6) က (p <1.9) တိုးမြှင့်ခဲ့သည်။ ပုံမှန်-ပေါ်ထွန်း morula နှင့် blastocysts 14 အမျိုးသမီး၏ 22 ကနေပြန်လည်ကောင်းမွန်ခဲ့သည်။ သို့သော် cyst အဖွဲ့များ II နှင့်အသီးသီး III ကိုအတွက်5ဝက်၏9၏9နှင့် 10 ၏ endometrium မှာတွေ့ရှိခဲ့ကြသည်။ ဒီအခြေအနေအတိုင်းအတာ, အမျိုးသမီးအကြားမတူညီကြ, cystic endometrial hyperplasia (CEH) အဖြစ် histologically ခွဲခြား, နှင့်၎င်း၏ဖြစ်ပျက်မှုအသက်အရွယ်-မှီခိုထင်ရှား။ , တည်းကကုသမှုမရှိဘူး SLA သေးသေးလေးဝက်ဝက်အစုသည်-အိမ်ထောင်ဖက်၏နောက်ဆက်တွဲအကဲဖြတ် CEH orgonadotropin ကုသမှု Alt မသက်ဆိုင်သောခဲ့ကြောင်းထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့သည်။
ဒီလေ့လာမှုကတစ်ဦးတည်း ALT ကုသမှု estrus တစ်ပြိုင်တည်းချိတ်ဆက်အတွက်ထိရောက်သောနှင့် SLA သေးသေးလေးဝက်အတွက် ovulatory တုံ့ပြန်မှုအပေါ်တစ်ဦးအကျိုးရှိသောသြဇာလွှမ်းမိုးမှုရှိကြောင်းပြသသည်။ exogenous gonadotropin ၏ဖြည့်စွက်အသုံးပြုမှုနောက်ထပ် ovulatory တုံ့ပြန်မှုကိုလှုံ့ဆျော; သို့သော်ပေးခြင်း estrous အပြုအမူများဖြစ်ပွားမှုနှင့်ပြင်းထန်မှုကိုလျှော့ချထားသည်။ morphologically ပုံမှန်သန္ဓေသား၏ recovery fertilization ထိခိုက်ကြောင်းအကြံပြုထားသည်။ သို့သော်သက်တမ်းမှာသေးငယ်တဲ့အမှိုက်သရိုက်များအရွယ်အစားတိုးမြှင့်သန္ဓေသားသေဆုံးမှုနှင့် / သို့မဟုတ် implantation တစ်ဦးလျှော့နှုန်းမှာဖြစ်ပေါ်နိုင်သည့်အဆိုပါသားအိမ် endometrium ၏ cystic ယိုယွင်းနဲ့ဆက်စပ်နိုင်ပါသည်။
ဒီလေ့လာမှုကရှစ်ပတ်ကြာတဲ့ကာလအတွက် Altrenogest powdera ၏နေ့စဉ်အုပ်ချုပ်ရေး၏ရလဒ်အဖြစ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်ရန်လိုသည့်အပြုအမူများနှင့်နုပျိုမြင်းအတွက် seminal parameters တွေကိုအပေါ်ဖိနှိပ်သက်ရောက်မှုဆန်းစစ်ခဲ့သည်။ ဤရွေ့ကား parameters တွေကိုလည်းရှစ်ပတ်ကြာ (နေ့က 111) ၏ပြန်လည်နာလန်ထူကာလပြီးနောက်ဆန်းစစ်ခဲ့ကြသည်။ လေ့လာမှုမှာသုံးကြိမ် (ရက်-9, 60 နှင့် 111) မှာတိုင်းတာကိုယ်အလေးချိန်, scrotal လုံးပတ်နှင့်မြင်း၏ခန္ဓာကိုယ်အခွအေနေရမှတ်အပါအဝင်မှတ်တမ်းတင်ခဲ့ပါသည်။ နှစ်ခုကုသမှုအုပ်စုများအတွက် Stallions လေ့လာမှုတစ်လျှောက်လုံးအလေးချိန်, ခန္ဓာကိုယ်အခွအေနေရမှတ်သို့မဟုတ် metacarpal တိုင်းတာအတွက်ကွာခြားခဲ့ပါဘူး။ သို့သော် scrotal လုံးပတ်ရက်သတ္တပတ်ရှစ်မှာကုသမြင်းအတွက် (P <.05) ယုတ်လျော့ခြင်းနှင့် Altrenogest ကုန်ကြမ်းအမှုန့်ရှစ်ရက်သတ္တပတ် post ကိုချုပ်ရာ (အပတ်က 05) အပြီး (P <.16) နိမ့်ကျန်ရစ်၏။ scrotal လုံးပတ်များအတွက်တန်ဖိုးများကိုတပတ် 05 မှာထိန်းချုပ်မှုနှင့်ကုသမှုအုပ်စုများအကြား (P <.16) ကွဲပြားခြားနားသောဖြစ်ကြသည်။ ခန့်မှန်းခြေနေ့စဉ်သုက်ပိုးထုတ်လုပ်မှု (DSP) တွင်လျော့ကျလည်းနှစ်ဦးစလုံးရှစ်ပတ်ကြာ (P <.01) နှင့် 16 ရက်သတ္တပတ် (P <.05) မှာကုသမှုအုပ်စုတစ်စုအတွင်းမြင်းမှာတွေ့ရှိခဲ့ကြသည်။ ခန့်မှန်း DSP ၌ဤကျဆင်းခြင်းအများဆုံးဖွယ်ရှိဆက်နွယ်နေကြောင်းခဲ့သည် scrotal လုံးပတ်လျော့နည်းသွားသည်။ Spermatozoal မူမမှန်သိသိသာသာခေါင်းကိုမူမမှန် (P <.009) နှင့်အမြီးမူမမှန် (P <.001) pre-ရုံးတင်စစ်ဆေးစုဆောင်းခြင်းကာလနှင့်ရှစ်ရက်သတ္တပတ်စုဆောင်းခြင်းကာလအကြားတိုးပွားလာအတူကုသမှုမြင်းအတွင်းတိုးမြှင့်ခဲ့သည်။
Stallions လေ့လာမှု (ရက်-12, 57 နှင့် 111) အတွင်းသတ်မှတ်လှောစမ်းသပ်မှုသုံးကြိမ် အသုံးပြု. လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်ရန်လိုအပြုအမူတွေများအတွက်သွင်းယူခဲ့ကြသည်။ အပြုအမူသုံးမိနစ်လေ့လာရေးကာလအတွက် estrus အတွက်လက်-ကျင်းပမြင်းဖို့ Stallions ဖော်ထုတ်နေဖြင့်အကဲဖြတ်ခဲ့သည်။ Flehmen ကြိမ်နှုန်းနှင့်ကြာချိန်ရှစ်ပတ်ကြာစုဆောင်းခြင်းကာလမှာ Altrenogest အမှုန့်-ကုသမြင်းအကြား (P <.05) ယုတ်လျော့။ လိင်တံ၏ယိုကြာချိန်ဟာကုသမြင်းအတွက်ရက်သတ္တပတ်ရှစ်မှာ (P <.08) ကိုလျော့ချဖို့တော်မှာ။ စိုက်ထူကြာချိန် (P <.05) နှင့်ကြိမ်နှုန်း (P <.005) ကိုလည်းရှစ်ပတ်ကြာမှာကုသအုပ်စုလျှော့ချခဲ့သည်။
ဤရွေ့ကားဒေတာရှစ်ပတ်ကြာ Altrenogest ကုန်ကြမ်းအမှုန့်နှင့်အတူငယ်ရွယ်မြင်း၏ကုသမှုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်ရန်လိုအပြုအမူတွေနဲ့သုက်ပိုးထုတ်လုပ်မှုအပေါ်သက်ရောက်မှုမှတ်သားတော်မူကြောင်းကိုအကြံပြုအပ်ပါသည်။ ဤအ parameters တွေကိုအများအပြားကုသမှုရပ်နားခြင်းပြီးနောက်ရှစ်ပတ်ကြာနေဖြင့် Pre-ရုံးတင်စစ်ဆေးတန်ဖိုးများမပြန်ခဲ့ပါဘူး။ နောက်ထပ်သုတေသနလျှော့လိင်စိတ်, scrotal တိုင်းတာနဲ့ဒီလေ့လာမှုမှာမှတ်တမ်းတင်နေ့စဉ်သုက်ပိုးထုတ်လုပ်မှုအားဖြင့်သရုပ်ပြအဖြစ် Altrenogest အမှုန့်အုပ်ချုပ်ရေး၏ဆိုးရွားသောသက်ရောက်မှုအနေဖြင့်အချိန်နှင့်အမျှပြန်လည်ဖေါ်ထုတ်ရန်ငယ်ရွယ်မြင်း၏စွမ်းရည်အားစုံစမ်းစစ်ဆေးရန်လိုအပ်ပါသည်။
AASraw ထံမှ Altrenogest အမှုန့်ကိုဝယ်ဖို့ကိုဘယ်လို